अख्तियारमा एउटै बाटोका फरक यात्री
Toggle navigation बिश्व्तर्क विचार बिशेष समाचारवित्त पूँजी बजारकर्पोरेटसहकारी–कृषिअन्तर्राष्ट्रियबिबिधEnglish Newsनेपाल अख्तियारमा एउटै बाटोका फरक यात्री
काठमाडौ, पुस २७, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की नियुक्त भएको साढे तीन वर्षपछि अयोग्य ठहरिए । सर्वोच्च अदालतले मुद्दा उल्टाएर अयोग्य ठह–यायो । त्यस्तो अयोग्य व्यक्तिलाई संवैधानिक परिषद्ले किन नियुक्तिका लागि सिफारिस ग–यो ? प्रमुख राजनीतिक दलको शीर्ष नेतृत्वले जनआन्दोलनमा दमन गरेकाले रायमाझी आयोगले दोषी ठह–याएको व्यक्तिलाई किन प्रमुख आयुक्त नियुक्त गर्न सिफारिस गरे ? काँग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले विवश भएर नियुक्तिको समर्थन गरेको भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर प्रचण्ड, बाबुराम, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, केपी ओली, वामदेव गौतम, विजय कुमार गच्छदारलगायतले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाएकोमा गौरवानुभूति गरेका थिए । अहिले उनीहरुले नै किन कार्कीलाई हटाए ? उनीहरुले किन समर्थन गरेका थिए ? के कार्कीसँग पैसा खाएका थिए ? कि भाङ खाएका थिए ? कार्कीका बारेमा अदालतमा १८ वटा नजीर प्रस्तुत भएका छन् । पूर्ण फैसला हेरेपछि फैसलाको थप व्याख्या गर्न सकिनेछ । तर अदालतको फैसला अमान्य हुँदैन, सर्वमान्य हुन्छ । थिति बसाल्न खोजिएको छ, स्वागतयोग्य छ ।लोकमानले आपूmलाई सर्वोच्च देखाउने गरी गरेको निर्णय त भेटिएको छैन तर त्यस्तो भान पार्ने कोसिसचाहिँ गरेका थिए । कम्युनिष्टहरुले सूर्यनाथलाई जस्तै प्रजातन्त्रविरुद्ध प्रयोग गर्नखोजेका थिए होलान्, उनी त्यसमा प्रयोग नभएको हुनसक्छ । त्यसपछि कम्युनिष्टहरुलाई लोकमानले आपूmहरुविरुद्ध कारबाही अघि बढाउनसक्ने खतराको संकेत पाएपछि उनलाई हटाइएको हुनसक्छ । जे होस्, उनी आए, उनी गए । उनी गएपछि उनको नेटवर्क अख्तियारमा नवीन घिमिरेतिर ढल्किएको छ । उनका विरुद्ध पनि अदालतमा मुद्दा कायम छ । उनीविरुद्ध मात्र होइन, अख्तियारका कार्यवाहक प्रमुख दीप बस्नेत, सावित्री गुरुङ र गणेशराज जोशीविरुद्ध पनि मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ । लोकमानविरुद्ध महाअभियोग र मुद्दा पुनरावलोकनको आदेशपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोलाएर अख्तियारका आयुक्तहरुलाई सामूहिक निर्देशन दिए, निर्भयपूर्वक काम गर्नू भनेर । उनले भनेका हुन्, के गरेका हुन् भन्ने व्यवहारबाट प्रष्टै छ । त्यसरी भेट्न जानेमा मुद्दा नपरेका तर यताउता गर्न माहिर मानिएका आयुक्त राजनारायण पाठक पनि थिए । त्यसपछि अख्तियारकै कार्यक्रममा गएर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड डुक्रिए । अदालतले उपयुक्त समयमा निर्णय दिने नै छ । मुद्दा परेकामध्ये पनि कामु प्रमुख आयुक्त बस्नेतको अवस्था अलिक भिन्न र गम्भीर छ । उनको नियुक्तिअघि नै आर्थिक दैनिकले त्यो कुरो उठाएको थियो । त्यसको कतैबाट खण्डन भएको छैन । सबैको सहमति हो भने हेरौं न त भनेर नदोहो¥याएको हो । ती शक्तिकेन्द्र यथावत् छन्, हल्कारा पनि दौडिरहेका होलान् तर अब कुरो अदालत पुगेको छ । अहिले भुइँमा पनि छ, पोल्टामा पनि छ । भुइँको टिप्नैपर्नेजस्तो अघोरी मनमा लागेको छ । तर भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको पनि देखिने डर छ । अब लोकमान एउटा पात्र हो, पाठशाला होइन । त्यो पाठ दीप बस्नेतले पनि पढ्नुपर्छ, गोपाल बस्नेतले पनि पढ्नुपर्दछ । नपढी सुखै छैन । १८ वटा नजीर बोकेका लोकमानले च्याँचुँ गर्न पाएनन्, जिब्रो फड्कारेकै भरमा कसैले साम्राज्य खडा गर्ने सपना नदेख्दा हुन्छ । पशुपतिलाई पनि पानी मिसाएको दूधले नुहाइदिने चलन चलाएको छ । भन्सारमा ३४ किलो सुन समातियो । कसले समात्यो ? किन समात्यो ? कसरी समात्यो ? सबैतिर चर्चा छ । तर अख्तियार मौन छ । दीप बस्नेत त्यसको बारेमा नजान्ने व्यक्ति होइनन् । उनी लोकमानका विकल्प होइनन्, कार्बनकपी हुन् । किन हात हाल्ने प्रयास समेत गरेनन् भन्ने कुरामा रहँदा बस्दा थप स्पष्ट हुँदै जानेछ । के अख्तियारको प्रमुख हुनु भनेको दिनमा लाटोकोसेरो बसेजस्तो धुम्धुम्ती बस्नु हो ? कि उद्दण्ड भएर मनपरी गर्नु हो ? दुवै होइन । त्यो दुईवटै क्षम्य हुँदैन । लोकमान गएपछि अब अख्तियारले केही गर्दैन भनेर भ्रष्टाचारीहरुको मनोबल बढेको हुनुपर्दछ । अब अख्तियार चुप लागेर बसेर पनि बस्न पाउने अवस्थामा छैन । अब त खुकुरीको धारमा हिँड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।अख्तियारमा दीप बस्नेतहरु नियुक्त भएको साँझ ¥याडिसन होटलमा एउटा कार्यक्रम थियो । त्यो कार्यक्रममा पत्रकार भवानी सुवेदी पनि थिए । उनी त्यहाँ पत्रकारको नाताले गएका थिएनन् । उनी लोकमानका सञ्चारविज्ञ थिए । लोकमान प्रमुख आयुक्त थिए, त्यति बेला उनलाई पौने प्रमुख आयुक्त भनिन्थ्यो । त्यस्तै अवस्था एकताका दरबारमा पनि थियो । राजा र राजपरिवारका सदस्यहरु ‘श्री ५’ हुन्थे, दरबार प्रमुख सम्वाद सचिव रन्जनराज खनाललाई पौने ५ भनेर चिनिन्थ्यो । राजाले गर्ने काममध्ये केही त खनाल आफैं बाहिरबाटै भ्याइदिन्थे रे ! अहिले ती रञ्जनराज खनाल महाराजगञ्जमा पहिले आप्mनो घरको भान्सेबाहुनको घरमा शरणार्थी जीवन बिताइरहेका छन्, अर्थात् दिन बिताउँदै छन्, मृत्यु पर्खेर बसेका छन् । अहिले पौने प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेततिर सरुवा भएका छन् । तर उनको नियुक्तिको खबर सुन्दा उनले आर्थिक दैनिकको यो प्रतिनिधिसँग भनेका थिए– ‘हजुर, अब अख्तियार खत्तम भयो, यो अख्तियार अख्तियार रहेन ।’ अब के होला ? अहिले कस्तो भयो ? यी सबै उनीहरु नै जानून् । तर उनीहरु जाने बाटो पनि उही हो !आर्थिक दैनिकबाट